Samsung sy Huawei dia mampitombo ny varotra entin'izy ireo | Androidsis
Ny tsenan'ny Wearables dia nanjakan'i Apple hatrany. Na dia lasa iray amin'ireo marika mahomby indrindra aza i Xiaomi toerana amin'ny toerana faharoa, misaotra ny varotra tsara amin'ny tanananao. Saingy ao amin'ireo angona vaovao efa naseho, na dia mijanona eo amin'ny toerany aza ireo marika roa ireo, dia tsy izy ireo no mahery fo. Huawei sy Samsung no marika mitombo haingana indrindra.
Mahatalanjona ny fitomboan'ny varotra fitafiana Samsung sy Huawei hatreto amin'ity taona ity. Dingana lehibe ho an'ny marika roa, izay mitady hanana andraikitra lehibe kokoa amin'ity sehatry ny tsena ity. Zavatra iray azon'izy ireo amin'ireo vokatra tsara ireo.
Ity fizarana fitafiana ity dia amin'ny fotoana tsara, miaraka amin'ny varotra izay mitombo tsy mitsaha-mitombo isan-taona. Ity no an'i Apple sy Xiaomi, izay ny 49% sy 68% dia nitombo ny varotra tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Tarehimarika tsara noho izany amin'ireo orinasa roa ireo.
Na dia Samsung sy Huawei aza no tena mitombo. Raha ny marika saoka dia nisondrotra 282,2% ny varotra raha oharina amin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona lasa. Raha mahita ny fomba ny orinasa koreana ny fivarotana azy ireo dia 151,6% raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ny varotra izay milaza mazava fa misy ny zon'ny mpanjifa.
Samsung dia iray amin'ireo marika mampiasa vola be indrindra amin'ny sehatry ny akanjo. Noho io antony io, tamin'ny telovolana voalohany tamin'ity taona ity dia namela anay vokatra marobe nohavaozina izy ireo, miaraka amin'ny Galaxy Watch Active na ny Galaxy Fit vaovao, efa amidy any Espana. Tiana ity fanavaozana ity, satria tena tsara ny varotra.
Ankoatra izany, herinandro lasa izay fa efa nambara fa Samsung dia nahazo làlana niaraka tamin'ny smartwatches. Zavatra manamarina indray miaraka amin'ireo angon-drakitra fivarotana tsara ho an'ny Koreana ireo. Noho izany, azo inoana fa ho hitantsika ny fomba manakaiky ny orinasa akaiky toy ny Xiaomi sy Apple amin'ny faritra avo indrindra amin'ny laharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Huawei sy Samsung, ny fitomboan'ny haingam-pandeha haingam-pandeha indrindra
Plex for Android izao dia manohana ny fiasan'ny PiP (Sary an-tsary)